FBC - Bakka bu’oonni ‘FIFA’ hoggantoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Ityoophiyaa waliin mar’atan
Bakka bu’oonni ‘FIFA’ hoggantoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Ityoophiyaa waliin mar’atan
Finfinnee, Bitootessa 4,2010 (FBC) Bakka bu’oonni Federeeshinii Waldaa Kubbaa Miilaa Idil Adunyaa (FIFA) dhimma filannoo preezdaantii Federeshinii Kubbaa Miilaa Ityoophiyaa fi koree hojii raawwachistuu irratti qooda fudhattoota waliin mar’atan.
‘FIFA’n xalayaa Gurraandhala 21, 2010 barreessen dhimma filannichaa irratti bakka bu’oota isaa akka ergu beeksiisuun, filanichi yeroo 4ffaadhaf dheerachuun isaa ni yaadatama.
Haaluma kanaan teessoo 'FIFA' kan taate Zuurik irraa Veeroon Mooseengoo Oombaa fi Luuka Niikolaa, kaleessa Finfinnee galuun hoggantoota federeeshiniichaa waliin mar’atanii jiru.
Preezdaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Ityoophiyaa Obbo Junaaddin Baashaa akka ibsanitti, kaleessa sa’aa booda qaamota filannicha irratti hirmaatan dhuunfaa dhuunfan dubbisanii jiru.
Namootni preezdaantummaaf dorgoman dabalatee, miseensonni koreen filannichaa fi koreen komii dhageeffatu bakka bu’oota kanneen waliin mar’ataniiru jedhameera.
Bakka bu’oonni har’a ganama gara Siiwuzeerlaanditti kan imalan yoo ta’u, marii gaggeeffame irratti hundaa’un ‘FIFA’n yeroo itti aanuutti haala filannichaa irratti murtee akka dabarsu eeraniiru.
Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Idil Adunyaa marii gaggeessun walii galtee uumuun, filannoon gaggeeffamu iftoomina akka qabaatuf haala mijataa kan uumu ta’uu xalayaa torbee 2 dura erganiin ibsuu TOI gabaasa isaan yaadachiisera.
Oduuwwan Biroo « Ispoorteessitoota shaampiyoonichaaf gaggeessan taasifame	Taphni Piriimerliigii Ityoophiyaa marsaa 2ffaa torbee 1’f dheerate »